” ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း မသူတော် ဆရာဝန်များနဲ့ မကြုံရပါစေနဲ့. . .၁၁ သမီးလေးရေ. ..ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေမကြုံ ရပါစေနဲ့ - Grand Parents-Day
Home / News / ” ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း မသူတော် ဆရာဝန်များနဲ့ မကြုံရပါစေနဲ့. . .၁၁ သမီးလေးရေ. ..ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေမကြုံ ရပါစေနဲ့
ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း မသူတော်ဆရာဝန်များနဲ့ မကြုံရပါစေနဲ့ဘယ့်နယ့်ညနေ ၃ နာရီက အပြင်ဆေးခန်းကိုတင်ခိုင်းပီး တင်ခိုင်းတဲ့ဆရာဝန်မကြီးမနက်ထိမလာပါ
မြေးမကတကိုယ်လုံးအေးစက်နေတော့ အပြင်ကအစောင့်တွေထွက်ပြရတယ်လေ အယ့်ကျမှဆရာဝန်မကြီးကိုလှမ်းခေါ်ပေးတော့ ဆရာဝန်မကြီးကလာတော့သွေးလွန်နေဘီတဲ့
အဲ့ဒိတော့ကုတင် ၃၀၀ သွားမလား ၅၅၀ သွားမလားတဲ့။ ပထမဆုံးဒီဆရာဝန်မကြီးဘာလုပ်နေလဲသူကြောင့် ပြောင်းလိုက်တဲ့ဆေးရုံရောက်ပြန်တော့ ခါကြီးရက်ကြီးမို့ဆရာဝန်ကြီးတွေတယောက်မှမရှိပါတဲ့ရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေကလဲ ဘာတွေလုပ်မှန်းမသိဆေးချိတ်တော့အဖွားကပြောတယ် မြန်နေတယ်ဆရာမဆိုတော့ မမြန်ဘူးတဲ့ အယ့်ဒီမှာအသည်းကကြီးလာပါလေရော အသည်းကကြီးလို့အောက်စီဂျင်ပေးပြန်ရော ပေးပြန်တော့နှလုံးခုန်တွေမြန်လာပါရော
သွေးကြောရှာမရလို့တဲ့မမြင်ရက်စရာ ဆီးမသွားလို့ဆီးပိုက်ထိုးပြန်ရော ဒီကလေးဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲ နီးစပ်တဲ့ကလေးဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းဆက်သွယ်တော့ ICU တော့ပြောင်းလိုက်ရပါဘီ
ဒါပေမဲ့သူတို့လက်တည့်စမ်းတာမှသတိမရှိတော့တဲ့ ကလေးကိုဆီးပိုက်ထပ်ထိုးတယ် ကလေးကမလှုပ်တော့ဘူး ဒါကိုမလှုပ်နိုင်တဲ့ကလေးကို ဂန်းနဲ့ဒူးဂေါင်းရိုး လက်ရိုးလေးတွေထပ်ဖောက်တယ် ချင်းဆီစမ်းဖို့တဲ့အဲဒီမှာကလေးကကျောက်ကပ်ပါပျက်စီးသွားဘီ အာ့ဒါကိုကျောက်ကပ်ဆေးအုံးမလို့တဲ့ အံ့ရော အံ့ရော အံ့ရော။ သနားစရာအကောင်းဆုံးကသတိမရတချက်ရတချက်ကို သူ့အမေမျက်နှာလးကြည့်ပီးဘာလုပ်ပြသလဲသူ့အမေကိုအိမ်ပြန်ချင်တဲ့အရိပ်အယောင်လေးပြတော့ အေးအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပီးပြောတော့ ကလေးအဖွားလဲမြင်ရော မျက်ရည်လေးတဖက်ကျပီးဆုံးသွားရှာတယ်
၁၁ လမြေးမလေးရေ ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ဒီအဖြစ်တွေမကြုံရပါစေနဲ့ ဆရာဝန်တိုင်းလူနာအသက်တချောင်း တန်ဘိုးထားနိုင်ကြပါစေမမေ့နိုင်တဲ့နေ့စွဲ 11-11-19#photo crd